Mandehana tafatafa tany dinidinika any Dubai - Torolàlana ho fampahafantarana ny sakafo fisakafoanana
Mandehana amin'ny tafatafa ao Dubai
navoakan'ny Dubai City Company at Janoary 1, 2018
Mandehana amin'ny dinidinika amin'ny Dubai dia iray amin'ireo rafitra tsara indrindra mba hahatongavanao eny ambony sambo. Indrindra raha mikaroka orinasa lehibe ianao. Namorona ny ekipanay fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny expats. Raha te hahafantatra ny fomba handefasana dinidinika amin'ny United Arab Arab Emirates. Dubai City Company dia tompon'ny avonavona amin'ny toerana maromaro ho an'ireo mpikaroka momba ny asa any amin'ny United Arab Emirates.
Resadresaka Walk-in tany Dubai sy ahoana no fomba ahazoana asa?. Ny ankamaroan'ireo kandidà dia miasa mandritra ny faran'ny herinandro. Amin'ny ankapobeny ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma. Tokony hihevitra hafa ianao fomba hitadiavana asa any Dubai. Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny alemaina Ao anatin'izany toe-javatra izany, mahita asa any Dubai tsy mora. Ny asa ao Emira Arabo Mitambatra lasa malaza amin'ny tsenan'ny asa manerantany. Amin'ny ankapobeny, mahita mpanadihady sy mpikarakara mpikarama.
Hatramin'izao fotoana izao dia mbola afaka Mitadiava mpitantana mpiasa tsara. Amin'ny lafiny tsara manakarama ny mpampiasa manao fanadihadiana an-tongotra any Dubai. Mba hametrahana azy amin'ny fomba hafa, ny dinidinika mandeha an-tongotra dia fomba iray hitadiavana asa any UAE. Raha vantany vao mangataka asa ao ianao Dubai. Afaka mahita taratasim-pankasitrahana miaraka amin'ny fahabangan-toerana vaovao any UAE ianao. Hatramin'izao, maro ireo mpikatsaka asa no nahita asa iray tamin'ny fandehanana tao amin'ny orinasa iray ary niresaka tamin'ireo mpitantana mpiasa.
Mandeha amin'ny tafatafa ao Dubai - Mitadiava asa any UAE
Resadresaka amin'ny orinasa lehibe
Manolotra tafatafa an-tongotra any Dubai izy ireo
Amin'ny orinasam-pifandraisana lehibe efa taloha. fandraisana mpiasa ho an'ny mpivarotra goavambe any Dubai. Eo ambanin'ireo toe-javatra ireo dia ny ahiahy indostrialy sy mpanamboatra ary Ny mpanome tolotra telecom koa dia manamboatra toerana ho an'ny dinidinika haingana. Mandritra izany fotoana izany dia mila manintona ny mpampiasa sy ny mpandraharaha manamboninahitra mba hiaraka aminao. Raha ny tokony ho izy dia tsara raharaham-barotra dia rehefa mahafeno fepetra ho an'ny toerana misy anao ianao. Companies any Dubai manakarama mpiasa marobe. Ny fomba tsara indrindra ho azy ireo dia ny fahazoana betsaka araka izay tratra. Ao anatin'ny fotoana fohy. Ny sasany amin'ireo mpikarakara mpikarama izay miantso ireo tolotra ireo. Amin'ny maha-matihanina ireo mpiasa matihanina,
Ireo orinasa goavana dia tsy manakaramana mpanatanteraka vaventy iray na roa. Ny ankamaroan'ny orinasa ambony teknolojia manakarama saika isan'andro. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, dia tokony manomboka mitady ny tolotra omena asa ambony ianao. Ohatra, mahita asa any Banks tahaka ny hevitra saro-pantarina hanaraka. Ny orinasa hafa tokony handinihanao dia orinasa mpamokatra fiara sy orinasa any Emirates. Satria izy ireo dia manangona vola ary afaka mahita mora haingana amin'ny resadresaka amin'ireo orinasa mahagaga ireo.
Raha toa ianao ka pamokarana vao haingana avy Pakistan. Ohatra, vao tonga any UAE ianao. Dia tokony hitantana ny asanao mikaroka lalindalina kokoa ianao. satria kandidà eo an-toerana mety efa nandefa CV's herinandro vitsy lasa izay. Aza adino fa ny orinasa lehibe manakarama manodidina ny 8 hatramin'ny herinandro 12.
Ahoana no ahafahana mahazo asa any UAE amin'ny fanadinam-panadinana?
Vonona ny handeha an-tsehatra amin'ny tafatafa ao Dubai miaraka amin'ny orinasa izahay?
Raha mitady asa any Dubai ianao. Ianao koa dia tokony hitsidika anay torolalana amin'ny antsipiriany momba ny fomba fitadiavana asa any Dubai. Alohan'ny mba hieritreretanao momba ny asa any ivelany ho expat. Tokony ho manana be dia be ianao vaovao tsara momba ny tsenan'ny asa. Indrindra raha mifindra any Emirates ianao. Tokony ho fantatrao Ahoana ny fomba fampiasana marketing mba hahazoana asa. Ankoatra izany, raha toa ianao ka mahatsapa ny zavatra tokony ho vitanao hanombohana resaka.
Ny iray amin'ireo safidy hendry dia ny tafatafa amin'ny antsika WhatsApp ao an-toerana. Betsaka ny matihanina mpiasa mpitrandraka izay manakarama any Abu Dhabi sy Dubai amin'izao fotoana. Mihoatra ny 80% Dubai ny mpikaroka asa mandefa an-tserasera CV. Noho izany dia ho fomba iray fitsidihana ny mpampiasa sasany. Resaho mifanatri-tava na eo amboniny Ireo WhatsApp Groups dia maneho ny tenanao ho an'ny mpampiasa any aoriana. Amin'izay dia mety hahita ny vokatra tsara ianao amin'ny fikarohana asa.
Hevitra iray hafa mahasarika ny fitadiavanao asa. Izany dia ho miasa ao amin'ny hotely Dubai. Ohatra, afaka miara-mandeha amin'ny CV nohavaozinao ianao ary fotsiny amin'ny maha mpanara-maso ny toerana banga. Ny sasany amin'izy ireo raha tena mila mpiasa vaovao. Manao fanadihadiana efa saika eo an-toerana. Ary mety manana vintana hanombohana ny fiainanao vaovao amin'ny ho avy.
Mandeha amin'ny dinidinika amin'ny Dubai dia mety ho anao !. Amin'ny lafiny iray, afaka manampy ianao ny hafa mba hahitana bebe kokoa any UAE.
Inona ny karazana resadresaka sy fanadihadiana mandeha an-tongotra?
Vonona handeha amin'ny resadresaka ao Dubai miaraka amin'ny orinasa izahay?
Ny mpiasa sy ny manakarama mpikarakara amin'ny lafiny iray. Orinasa HR mitarika resadresaka mandeha an-tongotra. Be dia be ny kandida hofidiana. Job seekers tonga amin'ny isa marobe ary mamita ny dingana amin'ny andro iray ihany. Ny fanatontosana asa avy amin'ny lehiben'ny mpitsoa-ponenana dia fanalahidy iray ao UAE. Ho an'ny tanjon'ny fandaharana voalohany sy Mpiasa an-tsokosoko matihanina amin'ny finday ho an'ny roatokom-bolana.
Tanànan'i Dubai dia nofinofy toerana for expats. Betsaka ny betsaka Mpikaroka any Indiana any Dubai izay mahazo asa any Emirates. Mazava ho azy fa tsy ny rehetra amin'izy ireo dia mahita asa an-tserasera na mandeha miaraka amin'ny CVS. Ny ankamaroan'ny ankamaroany dia nandefa fisafoana indray tamin'ny vavahadin'ny asa any an-toerana. Ary avy eo miandry ny ody no nitranga.
Fanontàna tsy miankina any Dubai City
Kandidà manala ny fahabangana amin'ny mpitantana ny HR. Ny mpanadinadina dia nomena ny taratasy fanolorana ny androtriny amin'ny saika ny banga rehetra atolony ho an'ny mpiasa vaovao. Ny orinasa ao Dubai dia mitantana soa ho an'ny mpampiasa sy ny mpiasan'ny fandraisana mpiasa. To Fenoy ny fomba fandraisana mpiasa ilainao mba hahazo asa ao anaty andro iray. Ary ho an'ireo mpangataka, rehefa mahazo ny fanamafisana ny asa mandritra io andro io.
Afaka mahita orinasa maromaro any Abu Dhabi any Dubai ianao. Iza ny fampindramam-bola amin'ny aterineto. Azonao atao, ohatra, ny mitady asa amin'ny orinasa lehibe teknika. Iray amin'ireo ohatra ireo manomboka asa ao amin'ny Google na amin'ny sasany cryptocurrency vao manomboka vaovao. Manangona ao izy ireo Dubai hatramin'ny 2020 rehefa mivoaka ny expo.
Vidim-pamindram-bola ambany ao Dubai
Amin'ity tanjona ity, ny fizotran'ny asa fisoratana anarana vita amin'ny marobe goavana ary manakarama be. Noho izany antony izany, ny vidin'ny mpangataka mpifaninana dia ambany noho ny antenain'ny orinasa. Ary mihoatra ny matetika, mihena ny vidin'ny fandraisana mpiasa ambany. Any Dubai City ireo orinasa dokam-barotra ho an'ny vaksiny. Raha izany dia, miditra any amin'ny toerana maro any Dubai mety hamonjy vola ny orinasa. Zava-dehibe ny mahatsapa fa ny dokambarotra tokana amin'ny vavahadin'ny asa tsara dia manampy amin'ny fampihenana ny vidiny.
Ka manandrana haka ny tenanao amin'ny asa any Dubai. Jereo ny fomba fiasan'ny mpitrandraka ary ho azo antoka foana ny hahazo fanavaozana avy amin'ny tsena eo an-toerana.
Quality Resources sy Recruitment
Mandehana amin'ny tafatafa ao Dubai mitarika indrindra amin'ny faran'ny herinandro. Noho ny be dia be kandidà miasa ao Dubai nanomboka ny Alatsinainy ka hatramin'ny zoma. Ho an'ny loharanom-baovao maro samihafa dia zava-dehibe. 2019 ireo orinasa ireo dia afaka manao izany ho anisan'ny mpifaninana tsara indrindra ho an'ny tafatafa. Ny ankamaroan'ny kandidà dia manana ny faran'ny herinandro.
Noho izany dia mahay sy manan-talenta kandidà ao Emirà Arabo Mitambatra. Ny porofo manamafy indrindra milaza izany. Raha tsy azonao atao ny manadihady izany amin'ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma. Mazava ho azy noho ny fanoloran-tena. Raha mandeha amin'ny dinidinika iray any Dubai ianao dia afaka manatrika tafatafa mandritra ny faran'ny herinandro.
Raharahan'ny Golfa ho an'ireo mitady asa Indiana vaovao dia lohahevitra mafana. Indrindra ho an'ny Expo ao Dubai. Ny ankamaroan'ireo kandidà dia efa nandefa CV ho an'ny mpitantana fandraisana mpiasa. Manantena fa efa vita sahady ianao. Satria amin'ny fotoana hitsidihanao an'i Dubai. Tokony hanana tafatafa famandrihana ahitanao am-pivoriana na resaka fandehanana an-tongotra amin'ny fotoana tonga any UAE ianao. Mazava ho azy, Azonao atao ny manao izany amin'ny Guide ho an'ny expats tarika asa. Ny sasany tamin'ireo mpikaroka asa dia nahita azy ireo ilaina indrindra ho an'ny mpikaroka vaovao. Indrindra raha miorina any ivelany sy miandrandra mitsidika an'i Dubai.
Famoahana ireo mpifaninana vaovao sy ny fizotry ny rafitra
Ny dingam-pihariana dia ny fizotry ny rafitra rehetra ao Dubai. Afaka mandroso mialoha ny fandehanana any anaty tafatafa iray. rehetra fotoana rehefa mitady asa ianao. Ao anatin'izany toe-javatra izany dia manome lisitra ireo kandida iraisam-pirenena aloha ireo orinasa. Amin'ny lafiny iray amin'ny fitadiavana asa dia a fototry ny fampianarana sy ny fepetra.
Raha ny tokony ho izy dia fitsapana an-tsoratra no ankamaroan'ny tranga omena. rehetra mpandraharaha fandraisana mpiasa mihazakazaka ho an'ny dingana tena antsipirihany sy ara-teknika. Fananganana kandidà vaovao ary ny fampandehanana ny dinidinika amin'ny fomba mety. Toy izany koa ny fifampidinihana HR farany amin'ireo mpahazo mpiasa sy mpitantana. Manao io dingana io somary liana amin'ny hiaina any UAE. Ny fizotran'ny rafitra dia manampy ireo orinasa handika ireo kandidà tsy tadiavina amin'ny asa any UAE. Mpikambana nanasokajy ny kandidà hahazoana mahazo ny mety indrindra iraisam-pirenena amin'ny MBA amin'ny faran'ny andro.
Ankoatra izany, ny governemanta Emirà Arabo Mitambatra dia manainga ny saina amin'ny fampiasana vehivavy. Ary satria fantatsika rehetra fa ny fifanakalozan-kevitra an-dalam-pandrosoana dia tonga hatrany aloha ny vehivavy. Noho izany raha mitady asa ianao ary vehivavy ianao ao Dubai. Tokony handinika ny fizotran'ny rafitra. Ary azo antoka, manararaotra izany.
Ny tolotra tsara indrindra hanatontosana asa any Dubai
Mpiasa maro any amin'ny firenena GCC no mikarakara hatrany ny banga vaovao. Expatriates efa niaina tena karama be Dubai Companies. Isan'andro isan'andro dia mpirotsaka hofidina iraisam-pirenena maro no mandray anjara amin'ilay orinasa vaovao avy any Afrika atsimo mankany Dubai. Noho izany, ny fahabangan-toerana any UAE dia natao foana ho an'ireo izay nandeha nandritra ny dinidinika an-tongotra. Ary ny tena zava-dehibe dia ny fidiranao ho an'ny Jobs Dubai.
Raha ny marina, ny mpirotsaka hofidina tsirairay dia tokony hahatsapa ho lehibe amin'ny orinasa iray. Ary tokony mahazo aina foana mirotsaka amin'ny sehatry ny asa vaovao any Dubai ohatra Afiliate marketing. Ny ankamaroan'ny monina any Dubai miaraka amin'ny orinasa tsara orina any Dubai sy Abu Dhabi isan'andro. Etsy ankilany, misy karazan'asa maro hafa izay vonona ny hiditra amin'izany andro hanaovana asa vaovao. Ilay tetikasa iray ihany, ary afaka mandray andraikitra tahaka izany koa ary amin'ny ambaratonga mitovy.
Ahoana ny handehanana ny tafatafa an-dalambe ao Dubai?
Vahaolana samirery ho an'ny adihevitra sy ny fandraisana mpiasa:
Tahaka an'i Dubai orinasa lehibe mpandraharaha. Ny orinasam-pifandraisana Dubai City dia manana ny fitaovana ao amin'ny tsenan'ny UAE. Ny orinasam-pivondronanay orinasam-pifandraisana izay mitaky anay hanintona ireo mpitady asa vaovao sy ireo mpila ravinahitra any ivelany. Dubai City Ny ekipa mpitrandraka ny orinasa dia manao dingana maro amin'ny fangatahana asa avy any India mankany Dubai. Ny orinasam-pifandraisan'ny HR dia manangona kandida ary misafidy azy ireo ao amin'ny tahirin-kevitra ao anatiny.
Afaka mahita masoivoho asa maro ianao any Dubai. Afaka mandeha any an-tanàna fotsiny ianao ary mandeha miaraka amin'ny CV. Misy toro-hevitra tsara vitsivitsy tokony ilainao alohan'ny hanombohanao. Ny porofo tena manamafy indrindra fa ataonay haingana ny kandidà manokana ho an'ny toeran'ny mpampianatra ao Dubai. Tokony haka fanadihadiana mandeha an-tongotra any Dubai miaraka amin'ny orinasa izahay.
Avy amin'ny kandidà iraisampirenena mialoha mialoha ve isika? alefaso ny resadresaka pejin-tranonkala. Mba hametrahana azy amin'ny fomba hafa, dia apetrakay amin'ny ilantsika valiny feno ho an'ny kandidà tsirairay ao UAE. Tena mavitrika amin'ny Linkedin sy Facebook izahay. Ary ambonin'izany ekipanay izany fametrahana dokam-barotra vaovao ao amin'ny gazety sy ao amin'ny tranonkala fa tsy tafiditra an-tariby mandeha an-dalambe ao Dubai.
Mandehandeha tafatafa any Dubai - Mihinà-tena.
Nahoana no zava-dehibe ny mandeha any amin'ny tafatafa ao Dubai?
Hery lehibe kokoa ny famelabelarana anao ao amin'ny UAE
Ny antony mahatonga ny mpivahiny mandeha miaraka amin'ny CV. Satria satria mendrika ny hikolokolo izany ary hangataka fanampiana. Izany karazana Ireo mpikatsaka asa asa mahomby kokoa amin'ny fikarohana. Fikambanana mpanafika ary manakarama mpikarakara. Ny fahitana an'io karazana mpikaroka asa io dia voosika tsara. Izany no antony nahazoan'izy ireo tafatafa momba ny kalitao tany Dubai. Ny mpikaroka sy ny loha dia mandinika ireo kandidà vaovao mifototra amin'ny resume. Ary mazava ho azy, raha mahita traikefa tsara ny mpikaroka karama dia homena azy ny asa. Mangataha tafa sy dinika ao Dubai miaraka amin'ny orinasa. Ity toerana ity natao ho anao sy ny ankohonanao.
Ampahafantaro ny lazanao
Ny sasany amin'ireo mpanatanteraka eo an-toerana ao Dubai City. manana efa niorina tsara laza. Ka tokony ho tsaroana fa haka ny asany eo amin'ny fomba mitovy daholo ianao. Tombontsoa be izany raha efa niasa tany Emirates ianao taloha. Fa ny fananganana anarana matanjaka vaovao sy Manao asa tsara any Emirates sarotra. Ny fanorenana ny lazanao any Dubai dia mitaky fotoana sy ezaka. Amin'ny lafiny tsara, afaka manamboatra ny asanao amin'ny orinasanay haingana.
Raha manana traikefa sy fahaiza-manao ampy ianao hahazoanao fanadihadiana. Miezaha hametraka tatitra matanjaka amin'ireo maso ivoho fandraisana mpiasa. Iza manampy anao be dia be amin'ny hetsiky ny asa ho anao?. Ny orinasa fandraisana mpiasa sasany dia ny fikarohana ny kandidà dia miala amin'ny tsenan'i Filipina. Ary mametraka ny lazanao sy ny fitokisanao amin'ny zavatra niainany. Noho izany antony izany dia tsy maintsy hitovy amin'ny lehilahy iray izay mahafantatra lalao sarotra ho an'ny asa vaovao.
Joba mitady teknika mendrika ny fotoanao
Rehefa mampihatra ny asanao ianao. Ianao dia mila mamorona fialamboly tsara. Ary andramo ny hamerenana izany fitaovana famolavolana tsara indrindra izany. Ary angamba manandrana mitady olona mahalala momba ny fanoratana asa matihanina any Dubai. Azonao atao koa ny manakarama ny resume mpanoratra amin'ny Internet miaraka amin'ny vidiny mora. Ny fomba tsara indrindra azonao atao dia ny fampiasana serivisy fizarana resume any Dubai. Ary mitadiava olona vitsivitsy afaka manary ny CV anao ankavanana mpitantana ao amin'ny orinasa. Any Dubai, ohatra, Afaka miasa amin'ny Mercedes Benz ianao. ao amin'ny Emirà Arabo Mitambatra, maro ny fotoana mety ho an'ny rehetra.
Ny iray aza mendrika ny fotoananao tranokala Dubai. Ireo mpandraharaha ao an-toerana eo amin'ny tranokala mametraka fanampiny. Izy ireo dia ambany ny vidiny ary afaka mahazo haingana ny atao amin'ny mpampiasa ianao. Ilay tranokala asa dia vitsy dia vitsy tokony hitsidika anao: ny Dubizzle Dubai Classifieds, Khaleej Times Free Classified, Dubai Classifieds.com. Etsy andaniny, tokony alefanao koa ny CV anao orinasa hafa ohatra ao Arabia Saodita. Misy ihany koa ny sasany amin'izy ireo miasa ao Dubai. Ary afaka miantso anao amin'ny Interview izy ireo.
Ratsy ratsy amin'ny CV - ahoana no hamaha azy?
Ity dia zavatra iray ilainao mba hahazoana antoka fa OK. Ny sasany amin'ireo mpikaroka momba ny asa any Dubai dia manana ny tsy fahaizany. Noho izany, ampianaro ny tenanao bebe kokoa momba ny Dubai City ary fantaro ny fomba ahafahan'ny ekipanay manampy anao. Ary raha te hahazo asa dia sahaniny fotsiny ny tolotra omena asa. Ka miorina amin'ny CV ao dia ho vitsy ny asa vitsy. Ary rehefa mpampiasa, mpiasa mpahazo mpiasa, tompon'andraikitra HR dia hijery CV. Avy eo ny fanapahan-kevitr'izy ireo dia tsy rariny fanovana haingana. Ataovy izay hahazoana antoka ny fihazonana indray ny fomba tsara. Tsy toy ny olona iray izay hanova toerana rahampitso izany.
Miomàna hiomana amin'ny dinidinika am-pandehanana any Dubai. Raha mampiditra CV miaraka amin'ny orinasa izahay dia hahazo izany. Miasa izahay amin'ny toerana tsara indrindra eto ambonin'ny tany.
Mpitarika ao amin'ny UAE sy ny Jobs ao Dubai
Te-hahita a Job in Dubai? Na dia mety ho marina aza isika dia afaka manampy anao. Manomboka asa vaovao ao amin'ny The Emira Arabo Mitambatra ary jereo ny orinasa mpikarakara. Ny orinasam-pikarakarana ao Dubai ary toeram-piasana ao an-toerana any Golfa faritra. Tena sarobidy tokoa ny mihatra amin'ny CV anao.
Afeno ny famerenana Ho any Amin'ny Tanàna Manan-dampana Lavitra Indrindra! - Dubai City Company. Mandehana tafatafaona eto Dubai izao !.